Madagasikara: Mianara aloha, “Afaka manampy anay hahita asa any Eoropa ve ianao?” · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Mieke Tulp, Jago Kosolosky Nandika (fr) i Emmanuelle Marmion, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 21 Septambra 2019 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Esperanto , Español, Deutsch, Nederlands
Raha tsy misy filazana manokana dia mankany amin'ny pejy amin'ny teny holandey avokoa ny rohy rehetra. Ity lahatsoratr'i Jago Kosolosky ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Knack ary nahazo alalana tamin'ny mpanoratra mba havoaka indray ato amin'ny Global Voices.
Ao Madagasikara, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra manerantany, mbola ho ela vao hiharihary izany hoe mandeha any an-tsekoly. Ny iray ampaha-efatry ny ankizy monja no mandeha any an-tsekoly, ary tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 35 isanjaton'ny mponina, ary miala ny nosy ireo olona vitsy nandia-fianarana.
Mpampianatra roa ao amin'ny ekipan'i Bruno Ratsimanohatra mijery ny filaharan'ny mpianatra.
“Be mpitady ny tanora nanaraka ny fiofanana ara-teknika, ka tsy mazava amiko ». Malahelo i Bruno Ratsimanohatra fa ny sekolim-panjakana ihany no tohanan'ny governemanta ary tsy raharahiana ny fampianarana tsy miankina. Talen'ny sekoly eo an-toerana Don Bosco any Mahajanga, avaratr'i Madagasikara ity olona miramirana eo amin'ny faha-efapolo taonany ity. Saingy mahatezitra azy ny tsy fisian'ny fanohanana ireo mpampianatra miisa 25 ao amin'ny sekoly ary mampanjavona ny tsikitsikiny ho toy ny ankizy.
Tanora 16 ka hatramin'ny 22 taona no manaraka fiofanana ara-teknika mandritra ny 2 hatramin'ny 3 taona, miaraka amin'ny fahaizana manokana isan-karazany tahaka ny teknika fampangatsiahana, fiofanana be mpitady ao amin'ity faritra manana toetr'andro mafana ity. Nividy milina glasy ity sampan-draharahan'ny sekoly ity ary mivarotra glasy any amin'ireo mpanjono eo an-toerana. Zava-dehibe ho an'ny fitohizan'ity fampiofanana ity ny fidiram-bola azo amin'izany.
Fivavahana, saina ary fitiavana
Manazava ny fitsipi-pampianaran'ny sekoly Don Bosco i Bruno Ratsimanohatra, «ny rafitra fisorohana» mifototra amin'ny andry telo lehibe: ny fivavahana, ny saina sy ny fitiavana. «Miara-miaina ny mpampianatra sy ny mpianatra eto». Tsy manakana ny fitsipika ireo soatoavina fototra ireo, ary mampiseho fanajana lehibe amin'ireo mpampianatra ny mpianatra. Manana ny anjara toerany ihany koa ny fanatanjahatena sy ny lalao, manampy tokoa amin'ny fampivondronana ny herin'ny mpianatra.
Miresaka amin'ny fomba esoeso momba ny rafitra manasazy eo amin'ireo sekolim-panjakana ny tale, saingy mahita fivoarana mampandrisika. Satria efa miasa eo amin'ny fampianarana ara-panjakana ankehitriny ny mpianatra taloha maherin'ny 2 500, eo an-dalam-piovana ny rafitra manontolo.
Amin'izao fotoana izao, dia mila mandoa 18 000 ariary isam-bolana (latsaky ny 5 euros) ny mpianatra vao afaka mianatra. « 80.000 francs malgaches », hoy i M. Ratsimanohatra. Nosoloina ariary malagasy tamin'ny taona 2005 ny franc nampiasaina herintaona taorian'ny fahaleovantenan'ny firenena tamin'ny taona 1960 2005.
Aloa isam-bolana ny ankamaroan'ny vidin-javatra ao Madagasikara, na amin'ny saram-pisoratana anarana any an-tsekoly aza. Ao amin'ny firenena iharan'ny fahantrana (tamin'ny taona 2012, maherin'ny 70 isanjaton'ny mponina no miaina ao an-tokonan'ny fahantrana), rendrarendra izany vina lovainjafy izany. Iray amin'ireo firenena 10 mahantra indrindra manerantany i Madagasikara, izay 400 euro ny hari-karena anatiny (PIB) isan'olona tamin'ny taona 2017. Raha ampitahaina, dia 38 700 euros ny harikarena anatiny isaky ny mponin'ny Belzika tamin'io taona io.
Tsy takatra izany saram-pisoratana anarana somary ambany izany raha tsy misy fanampiana avy any ivelany. Mahazo fanohanana avy any Belzika ireo sekoly Don Bosco eto Madagasikara amin'ny alalan'ny VIA Don Bosco, fikambanana tsy miankina (ONG) izay namatsy vola 445 000 euros mahery tamin'ny tetikasa manerana ny firenena tamin'ny taona 2017. Avy amin'ny governemanta Belza sy ny loharanom-bolany manokana toy ny fanomezana sy lova izany vola izany. Miezaka ny sekoly ary manao asa kely hamenoana ny vola tsy ampy indraindray ireo izay tsy mahavita mandoa ny vola manontolo, na dia voatery mandroaka mpianatra sasany aza ny sekoly indraindray. Mikasa ny hanangana lalam-piofanana fohy kokoa, izay haharitra volana vitsivitsy monja ny mpitantana” satria te hahazo vola ny ankamaroan'ny mpianatra ary noho izany dia te-hiasa haingana.”
“Mianatra aho mba ho afaka hiaraka amin'ny zanako”
Efa manaraka fiofanana haingana kokoa ao amin'ny sekoly tsy miankina Don Bosco, tantanin'ireo Maseran'ny Don Bosco any Mahajanga ary tohanan'ny VIA Don Bosco ihany koa i Bahadouraly Christiana Haingonirina. Mianatra momba ny fanamboarana mofomamy izy mba hahafahany hivarotra paty.
Mpianatra miavaka Ramatoa Haingonirina. 35 taona izy ary mamelona irery ny zanany telo. Maharitra telo volana ny fiofanana ary mianatra roa andro isan-kerinandro izy. “Mianatra teoria adiny roa ary fampiharana adiny efatra isaky ny andro iray. Mianatra aho mba hahafahako miasa ao an-trano, miaraka amin'ny zanako. ” Mitentina 25 000 Ariary ny fiofanana ataony, izany hoe 6,50 euros mahery kely isam-bolana.
Bahadouraly Christiana Haingonirina sy ny zanany. © Jago Kosolosky Bahadouraly Christiana Haingonirina avec ses enfants. © Jago Kosolosky
Inona no nitranga tamin'ny Ramatoa Haingonirina sy ny vadiny? Nihomehy izy toy ny hoe tsy mahazatra ilay fanontaniana. Tsy efa niteny ve izy fa mitaiza irery ny zanany? “Nanapa-kevitra ny hiala izy (ny vadiny), ka tsy afaka nanakana azy aho.” Satria manjaka ny fahantrana, dia mandositra ny andraikiny amin'ny maha raim-pianakaviana ny lehilahy, toy ny hoe lalàna voajanahary izany. Nahazo rariny tamin'ny tribonaly izy fa mandoa vola ho an'ny zanany ny vadiny. Ny vola 65 euro aloany isam-bolana no manampy ilay fianakaviana hivelona araka izay tratra. “Handeha hianatra koa aho mba ho afaka mampianatra ny zanako koa avy eo.”
Baolina fandaka sy piano
Ao ambadiky ny iray amin'ireo fitoeran'entana lehibe hianaran'ireo mpianatr'i Bruno Ratsimanohatra no misy an'i Amsine (roapolo taona ) sy Elersene (21 taona). Samy avy amin'ny tanàna iray ihany izy roa ireo, tanàna kely mandeha sambo tontolo andro avy any Mahajanga, ary manaraka fiofanana mitovy momba ny teknika fampangatsiahana. Nilaza ny mpianatra fa faly amin'ny fiofanana, ary manomboka miala voly. “Tsy afaka manampy anay hahita asa any Eoropa ve ianao? Mpilalao baolina kitra mahay aho ary izy indray mahay piano,” hoy ny iray.
Mampanahy ahy ny tsy fifandanjan-kery eo amin'izy ireo sy ny tenako, izay zokiny kokoa noho izy ireo. Amin'ny maha-mpanao gazety vahiny ahy, miavaka amin'ny fitenenako frantsay aho ary koa amin'ny vatako. Andro vitsy taty aoriana, mandositra amin'ny fahitana ahy ny kamboty nandositra. Kely sy mahia ny mponin'i Madagasikara, ary matahotra ahy ny olona sasany. “Afaka manampy anay ve ianao? “. Manazava amin'i Amsine sy Elersene aho fa hevitra tsara ny mianatra any amin'ny oniversite.Tsy tadidiko akory hoe iza no mpilalao baolina kitra ary iza ilay mpitendry piano.
Tontosa ny fitsidihana an'i Madagasikara tamin'ny alàlan'ny ONG Belza VIA Don Bosco, izay manohana tetikasa mikendry ny hanampy ireo tanora sahirana hahita asa mendrika ary hanana fiainana tsara kokoa.